Nanokatra fanadihadiana ny Polisim-pirenena: kaomisera nikasi-tanana sy nandratra olona | NewsMada
Nanokatra fanadihadiana ny Polisim-pirenena: kaomisera nikasi-tanana sy nandratra olona
Vesatra ara-pitsipi-pifehezana (disciplinaire) ary vesatra araka ady heloka (pénal). Ireo ny miandry ilay kaomisera polisy sy ny zanany, polisy ihany koa, voalaza fa nikasi-tanana ka nandratra lehilahy iray, teny amin’ny faritra Ampitatafika, ny asabotsy lasa teo.
Mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly (HJRA), hatramin’izao, ilay raim-pianakaviana iray (tapa-tanana, nivonto ny masony, voakapoka tao amin’ny hatony…) nodarohina kaomisera iray misahana andraikitra ambony ao amin’ny sampandraharaha iray eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka teny Ambohikely Ampitatafika, ny asabotsy tamin’ny 7 ora hariva. Fanamparam-pahefana tsotra izao ny fiheveran’ilay niharam-boina sy ny fianakaviany manoloana ny fihetsika nataon’ilay kaomisera sy ny zanany lahy (agent de police) anisany nidaroka ilay raim-pianakaviana ihany koa tamin’io fotoana io. Araka ny fitantaran’ilay niharam-boina, toy izao ny zava-nisy teny an-toerana tamin’io fotoana io. “Hampiditra ny fiarako ao anaty tamboho aho ka namelona jiro famantarana satria nahatazana fiara tao aoriana. Raha iny hihemotra iny anefa aho no nobahanan’ilay kaomisera tao aoriana sady niharan’ny ompa variraraka tamin’ny “klaxon”. Voatery nivoaka aho nanontany hoe fa misy inona? Nilaza izy fa mampitohana fifamoivoizana ny zavatra ataoko kanefa tsy nisy fiara afa-tsy ny anay ihany teo tamin’io fotoana io. Nanontany azy indray aho, saingy ompa fanintelony sady nivoaka ilay zanany ka nitabataba sy nanompa ary nidaroka ahy”, hoy ny fitantaran’ilay raim-pianakaviana niharam-boina. Tsy nijanona hatreto fa nivoaka ireo olona efatra tao anaty fiara ka samy nidaroka ahy teo ivelan’ny tamboho, araka ny fanazavany hatrany. Nitsoaka avy hatrany ireo nahavanon-doza ka nenjehin’ny fianakaviany ary nifankatratra tao amin’ny biraon’ny polisy tsy lavitra teo. Teo no nahafantaran’ny fianakavian’ilay niharam-boina fa kaomisera ity nahavanon-doza ity. Nohamafisin’ny fianakavian’ilay niharam-boina fa mamo ity kaomisera ity ary nikasa ny handamina ny raharaha tamin’ireo fianakaviana, saingy tsy nisy anefa izany. Nametraka fitoriana ao amin’ny Inspection générale de la police nationale (IGPN) Anosy ilay niharam-boina noho ny voina nahazo azy.
“Tsy misy ambonin’ny lalàna na iza na iza…”, hoy ny minisitra
Namoaka fanambarana kosa ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka manoloana ity raharaha ity ary nanolotra fisaorana sy nampirisika hatrany ny fifanomezan-tanana avy amintsika tsirairay avy amin’ny filazam-baovao hisorohana ny fandikan-dalàna na avy amin’iza na avy amin’iza. “Manamafy sy manantitra hatrany koa fa tsy misy ambonin’ny lalàna na iza na iza, indrindra fa mpitandro filaminana izay nianatra manokana ny momba izany”, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka (MSP). Nitondra fanamarihana hatrany ny MSP fa efa naharay fitoriana momba ity raharaha ity ny eo anivon’ny polisim-pirenena. “Efa nosokafana ny fanadihadiana ka hamarininay fa tsy polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny 67 ha (CSP7) io polisy voalaza io fa miasa ao Anosy. Araka ny fanadihadiana natao, izy sy ny zanany lahy no voakasika amin’ity raharaha ity”, hoy hatrany ny MSP. Amin’ny toe-javatra mitranga toy izao, vesatra roa ny mihatra amin’ny polisy mandika lalàna. Ny vesatra ara-pitsipi-pifehezana (disciplinaire) ary ny vesatra momba ny ady heloka (penal). “Manamarika hatrany izahay fa vonona ny hampiseho ny mangarahara tanteraka amin’ny mety ho tohin’ny raharaha momba ity tranga ity”, hoy ny minisitry ny Filaminam-bahoaka namarana ny fanazavany.